Ezinye izindlela ze-Pluto TV - Izinhlelo zokusebenza ezi-10 ezihamba phambili namawebhusayithi - Ezokuzijabulisa
Ezinye izindlela ze-Pluto TV ziyimfuneko kubantu abahlala ngaphandle kwe-USA. IPluto TV imahhala ukusebenzisa isevisi yokusakaza, etholakala kuwo wonke umuntu. Ungalanda kalula uhlelo lokusebenza kuzingxenyekazi zakho. Ezokuzijabulisa bekunzima ukuzithola futhi kubize kakhulu kithi sonke.
Abasebenzisi abafuna ama-movie wamahhala futhi Imibukiso ye-TV angabhalisa ku-Pluto TV. Kumahhala ngokuphelele kodwa kutholakala kuphela e-United States. Sincoma ukuthi ulande insizakalo yabo kumadivayisi wakho.
Uma usuvele unayo Pluto ungenza kusebenze ngokulandela umhlahlandlela wethu.
Ezinye izindlela ze-Pluto TV - Izinhlelo zokusebenza namawebhusayithi
Kunamapulatifomu ambalwa atholakala ku-inthanethi akunikeza okuqukethwe kwekhwalithi. Nazi izinketho ongazithola.
1. Amashubhu e-TV
I-Tubi TV ikhululekile ukusebenzisa ipulatifomu yokusakaza. Inikeza abasebenzisi umtapo omkhulu wokuqukethwe otholakalayo. Ungabuka ama-movie nezinhlelo ze-TV mahhala ngokuphelele. Akukho okubhaliselwe okudingekayo ngokusebenzisa izici zabo. Abasebenzisi bangasakaza noma yikuphi ngale nkundla.
Bangabalingani bama-studio amaningi. Ungathola okuqukethwe kwekhwalithi mahhala ngokuphelele.
Abasebenzisi bangasakaza kumadivayisi amaningi njenge-PC, i-PS4, i-Xbox, nama-Smartphones.
Kunezinhlobo eziningi zokuqukethwe ezitholakala kuwebhusayithi.
Izinsizakalo ziyaziwa emhlabeni wonke wonke umuntu angazijabulela.
Bangabalingani be-MGM, iLionsgate, iParamount, nezitudiyo eziningi ezahlukahlukene.
Kulula ukwenza i-akhawunti endaweni yesikhulumi.
I-Kanopy ingenye futhi yamahhala yokusebenzisa enye indlela yabasebenzisi be-Pluto TV. Ungasebenzisa ipulatifomu ukusakaza okuqukethwe kwe-classic ne-indie. Kuphelele kulabo abafuna ukuzama ibanga elingaphansi komhlaba. Ungajabulela imibukiso engaphansi komhlaba nama-movie endaweni yesikhulumi.
Kutholakala ikakhulukazi kubanikazi bamakhadi emtapo wezincwadi nakubafundi baseyunivesithi. Banomtapo wezincwadi omkhulu wama-movie ahlonishwa ngokujulile. Sincoma ukuthi uyizame ukuze usebenzise mahhala.
Ingxenyekazi isebenza kuwo wonke ama-smart TV, amafoni, nama-laptops.
Itholakala kuzithameli ezimbalwa zabasebenzisi.
Ungabhalisa kalula ngewebhusayithi yabo.
I-Stirr ingenye futhi indawo yokusebenzisa mahhala enezinzuzo eziningi. Ilungele labo abafuna ukufinyelela kalula kokuqukethwe. Itholakala kuzingxenyekazi ezahlukene. Ungakhetha indawo ukuze uthole okuqukethwe okuhlobene nendawo okuyo.
Izinsizakalo zabo azidingi ukubhaliswa. Ezikhathini lapho okubhaliselwe kuya ngokuya kubiza kakhulu, i-stirr ikunikeza izinzuzo ezinkulu. Bazama ukuguqula okuqukethwe kwakho.
Kuhle ukuzama imibukiso nama-movie ahlukile kusuka ezifundeni zakho.
Qala ukusakaza kunoma iyiphi idivayisi oyithandayo.
Le sevisi inezinhlelo zokusebenza ezitholakala kuwo wonke amapulatifomu.
IFilmon isevisi yokusakazwa bukhoma ye-TV etholakala ku-inthanethi. Yipulatifomu yakudala ene-interface yomsebenzisi eyinhloko.Ziyi-platform ye-OTT ebifunwa kakhulu kusukela ngo-2006. Abasebenzisi bangabuka i-UK Live TV esithangamini.
Futhi banelabhulali enkulu yama-Movie nezinhlelo ze-TV ezitholakalayo. Ungasebenzisa izici ezinhle zensizakalo.
Abasebenzisi bangazama isici sabo se-Video On Demand ngamathani wokuqukethwe.
Sakaza usebenzisa iwebhusayithi elula kwi-Laptop / Desktop yakho.
Ine-interface elula yokusebenzisa wonke umuntu.
5. IVudu TV
IVudu iyisevisi yokusakaza ye-premium enikeza okubhaliselwe kubasebenzisi. Ungazama futhi ukusakazwa kwamahhala. Kukhona okuqukethwe okuyingqayizivele okungasebenza kahle ngokuya ngokuthanda kwakho.
Kunezikhangiso ezincane zokuvumela ukusakazwa kwamahhala kuwebhusayithi. Ibuye inikeze abasebenzisi uhlelo lokusebenza olulula lokusebenzisa.
Kukhona okuqukethwe okutholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene kuwebhusayithi.
Abasebenzisi bangazama kuma-Android, iOS, naku-Smart TVs.
Ungakha i-akhawunti ukuze ufinyelele kalula kungxenyekazi.
IHoopla yipulatifomu yedijithali ekunikeza izinzuzo eziningi. Bangabalingani nemitapo yolwazi eminingi yokunikeza usizo. Ungabhalisela le nsizakalo ngekhadi lakho lomtapo wolwazi. Benza kube lula ukubhalisela okuqukethwe okuyingqayizivele kwamahhala. Abasebenzisi banokufinyelela kuma-movie, imibukiso ye-TV, Umculo, nezincwadi mahhala ngale nsizakalo.
Luhlobo lwesikhulumi sokusakaza. Isevisi yokuqhekeka komhlaba ilungele wonke umuntu ofuna ukufinyelela okulula kwimibukiso.
Abasebenzisi bangaboleka ngokushesha ama-movie edijithali nezinhlelo ze-TV.
Itholakala njengohlelo lokusebenza kuzingxenyekazi eziningi, kufaka phakathi ama-smart TV.
Inqubo yokubhalisa nokuqinisekisa iyashesha.
ICrackle iyi-platform yesony yokusakaza. Banikela ngokusakazwa okulula kuwo wonke umuntu oku-inthanethi.Inomtapo wezincwadi ohloniphekile wama-movie nezinhlelo ze-TV. Ungasakaza kunoma iyiphi idivayisi usebenzisa le webhusayithi.
Abasebenzisi kufanele bakhe i-akhawunti ukufinyelela insizakalo. Ipulatifomu okwamanje itholakala kuphela kubahlali base-US. Sincoma ukuzama ezinye izigaba zakudala kuwebhusayithi.
Iza nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esiyingqayizivele, esilungele ukusetshenziswa kwakho.
Ungathola ikhodi yokufinyelela yokudlala ama-movie nemibukiso noma yikuphi.
Banomtapo omkhulu wemibukiso nama-movie.
I-Xumo TV iyisevisi yokusakaza ekhethekile yase-USA. Banikeza abasebenzisi ukuthi bafune okuqukethwe mahhala.Ungajabulela isipiliyoni esingenamthungo ngokusebenzisa i-interface yabo ephelele yomsebenzisi.
Ipulatifomu inikeza okuqukethwe kwamahhala ngokuxhaswa kwesikhangiso. Kulula ukufinyelela kuwo wonke umuntu oku-intanethi. Abasebenzisi bangathola i-TV ebukhoma nokuqukethwe okufunwayo futhi.
Abasebenzisi bangathola okuqukethwe okuhlukile okufunwayo kuwebhusayithi.
Inokusekelwa kweziteshi eziningi ze-TV.
Kunomtapo wolwazi omkhulu wama-Movie nezinhlelo ze-TV.
Uthola izinhlelo zokusebenza zamadivayisi we-Android ne-iOS.
9. Isiteshi seRoku
I-Roku ingenye yezingxenyekazi ezinkulu kakhulu zensiza yokusakaza. Futhi zikunikeza mahhala ukusebenzisa ipulatifomu yokusakaza. Iwebhusayithi ifinyeleleka kalula futhi ayikubangeli zinkinga. Abasebenzisi bangakha ngokushesha i-akhawunti ukuze isetshenziswe kalula.
Sincoma ukuthi uzame, ubuke okuqukethwe kwe-premium. Le sevisi imahhala kuwo wonke umuntu.
Kuza nomtapo wolwazi omkhulu wokuqukethwe ovela kuwo wonke umhlaba.
Uthola ukufinyelela kumabonakude amaningi we-TV namabhayisikobho.
Okuqukethwe kuwebhusayithi kuhlukaniswa ngezinhlobo ezahlukene.
Ipulatifomu yeContv ilungele labo abafuna ukukhululeka ekuzijabuliseni kwezindleko. Kuya ngokuya kuba nzima ukuthola amapulatifomu anjalo. I-ConTV ikuvumela ukuthi uhlole izinketho.
Iwebhusayithi nezinhlelo zokusebenza kulula ukuzisebenzisa. Isebenza ngawo wonke ama-smart TV kanye nezinhlelo zokuzijabulisa ekhaya.Kuyipulatifomu ehlukile enezinhloko eziningi ze-indie. Abasebenzisi futhi bangabuka i-anime nezinhlobo eziningi ezimnandi.
Abasebenzisi bangahlola izinketho eziningi ngale webhusayithi.
Iphelele kulabo abajabulela okuqukethwe ngaphansi komhlaba.
Kukhona izinhlelo zokusebenza zawo wonke amadivayisi kungxenyekazi.
Ungathola kalula okuqukethwe okusha ngensizakalo yabo.
Ungayisebenzisa kanjani iPluto TV noma kuphi?
Noma ngubani ofuna ukuzama iPluto TV ngaphandle kwe-USA kufanele athole i-VPN. Kunezinketho eziningi zamahhala nezikhokhelwayo ezitholakala kwi-inthanethi. Indlela elula yokufinyelela iwebhusayithi nge Hola VPN. Isandiso sesiphequluli esisebenza mahhala ngokuphelele. Ungayizama namuhla futhi uhlole izinketho zakho.
Inketho ekhokhelwayo ethandwayo yile I-NordVPN . Banamanani entengo abiza ngokweqile kuyo yonke imikhiqizo yabo.
IPluto TV ingenye ye- izinsiza zokusakaza ezihamba phambili enikeza ukusakazwa kwamahhala kubasebenzisi bayo. Ungathola okuqukethwe okuhle kakhulu ngezinye izindlela zamahhala. Sizama ukuhlanganisa izindlela ezihamba phambili zamahhala ze-pluto tv ngalo mhlahlandlela.
Ama-movie angama-50 wokubuka ividiyo enkulu
ungaba namaphrofayli amangaki ku-disney plus
amakhodi wegeyimu we-xbox 360 wamahhala
ukulanda mahhala kwe-pc
ingabe umfundi oyinhloko ubiza imali
bukela i-hd tv shows mahhala